Fampisehoan-kery amin’i Frantsa: miantso firaisankina hitakiana ireo Nosy Malagsy ny Otrikafo - ewa.mg
News - Fampisehoan-kery amin’i Frantsa: miantso firaisankina hitakiana ireo Nosy Malagsy ny Otrikafo
Tsy afaka ny hangina
fotsiny amin’izao. Nitondra ny heviny manoloana ny fibodoan’i
Frantsa ireo Nosy Malagasy ny eo anivon’ny antoko Otrikafo. Mitaky
fiaraha-mientana izy ireo.
“Resy lahatra izahay fa raha
tsy miray hina isika, sarotra ny hiady amin’ny Frantsay. Fa raha
miray hina isika, tsy misy antony tsy tokony hamerenan’ny Frantsay
an’ireo Nosy malagasy ireo amintsika”, hoy ny mpitondra
tenin’ireo fikambanana sy antoko politika amin’ny fitakiana ireo
Nosy Malagasy, ny sekretera jeneralin’ny antoko Otrikafo,
Rabevahiny Elia, omaly.
Koa raha hiroso ny
fitondram-panjakana na, sanatria, hihazohazo manoloana ny tolona
amin’ny fitakiana : efa nanapa-kevitra ireo antoko sy fikambanana
ireo fa hanohy ny tolona hatramin’ny farany.
famondronan-kerin’izy ireo izany, misy ny taratasy hatao ho an’ny
filohan’ny Repoblika. Maniry fihaonana aminy izy ireo ao anatin’ny
hetsika. Mba hahazoan’ny filohan’ny Repoblika manazava amin’ny hery
velona rehetra mitaky ny famerenana ireo Nosy malagasy manodidina
ireo amin’i Madagasikara: manao ahoana marina ny paikadin’ny
fanjakana momba ireo ady amin’ny fitakiana?
“Raha mbola misy ny
fahavononana sy paikady avy amin’ny fanjakana, vonona koa izahay
hitondra ny fomba fijery heverinay fa tokony hatambatra ny
amin’ny fitakiana an’ireo Nosy malagasy ireo”, hoy
L’article Fampisehoan-kery amin’i Frantsa: miantso firaisankina hitakiana ireo Nosy Malagsy ny Otrikafo a été récupéré chez Newsmada.
USAID: nidina ifotony tany Andapa ny ekipa teknika
Nidina tany Andapa, tamin’ny herinandro teo, ny delegasiona avy ao amin’ny sampan-draharaha amerikanina misahana ny fampandrosoana USAID/President Malaria Initiative (PMI). Nitarika ny ekipa ny mpanolotsaina maharitra, ny Dr Laurent Kapesa sy ny fandaharanasa Mahefa Miaraka, notarihin’ny Dr Yvette Ribaira sy ny mpiara-miasa ao amin’ny faritra.Niompana tamin’ireo karazana tolotra ara-pahasalamana manoloana ny ady amin’ny tazomoka ny fitsidihana. Nodinihina tamin’izany ny mikasika ny fivoaran’ny aretina tazomoka ao amin’ny distrika sy ny fandraisana an-tanana ny marary.Teo koa ny fitantanana ny tahirim-panafody sy ny fanaraha-maso ny fenitra tokony harahina momba ny fanafody tazomoka lany andro. Ankoatra izany ny fitsinjarana ireo lay misy odimoka isan-tokantrano hiarovana amin’ny kaikitry ny moka, indrindra amin’izao andro mafana maha foy ny atodina moka izao.Noho ny hamehana ara-pahasalamana sy ho fanajana ny fepetra fiarovana amin’ny valanaretina Covid19 dia natao tamin’ny alalan’ny fifandraisan-davitra ny fitsidihana.Mbola mamono olona amin’ny faritra maro eto Madagasikara ny aretina tazomoka. Anisan’ny tena lasibatry ny aretina tazomoka ny zaza sy ny ankizy. Maimaim-poana ny fanafody fitsaboana izany eny amin’ny tobim-pahasalamana miankina amin’ny fanjakana. Tsy tokony hiandry aretina efa mihombo vao anatona toeram-pitsaboana ialana amin’ny fahasarotana sy ny mety ho fahafatesana.Tatiana AL’article USAID: nidina ifotony tany Andapa ny ekipa teknika a été récupéré chez Newsmada.
Anjomakely : levon’ny afo ny vidina kamiao roa
Nitrangana haintrano teny Anjomakely lalam-pirenena fahafito, omaly tolakandro tokony ho tamin’ny 3 ora. May tamin’izany ny tsenana mpamongady iray sy ny trano fitahirizany entana, kilan’ny afo tao avokoa ny entam-barotra rehetra, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Levon’ny afo ihany koa ny vola antapi­trisa maro vidina kamiao miisa roa an’ireo mpivarotra. « Nipoaka tampoka ny ka­ontera iray teny ivelan’ireo trano ka izay no nitarika ny fahamaizan’ireo trano roa le­hibe misy rihana », hoy ny loharanom-baovao iray. Niara-namono ny afo ny mpamponjy voina avy eny Tanjombato sy ny sampana avy ao Tsaralalana. Tonga teny an-toerana koa ny tompon’andraikitry ny Jirama namono ny herinaratra. Voafehy tanteraka ny afo, ora iray tao­rian’ny tranga. Ny zandary kosa nandamina ny fifamoivoizana izay nitohana an-kilometatra maro teny an-toerana.Henintsoa HaniL’article Anjomakely : levon’ny afo ny vidina kamiao roa a été récupéré chez Newsmada.
Mila fitandremana: be loatra ny tantara mampiahiahy
Amin’ny ankapobeny, saika ireo vahiny no nanoratra sy nahasoratra ny tantaran’i Madagasikara sy ny zava-nitranga teto fahiny. Tsy misy hamaivanina ireny, satria, mila manana fototra mazava ny firenena sy ny mponina ao aminy. Amin’izao vanim-potoana lalovan’ny firenena izao anefa, mitobaka etsy sy eroa ireny asa soratra ireny. Ny fitaovana ahafahana manapariaka izany rahateo efa maro, anisany ny facebook izay. Ho an’ny mpikaroka, “be loatra ny mampiahiahy amin’ireny voalaza ao anatin’ny facebook ireny, raha ny momba ny tantara nisy teto Madagasikara”. Tsy eo amin’ny tantaram-pirenena ihany fa tafiditra ao anatin’io na ny lafiny kolontsaina, ny toekarena, sns, raha ny fanazavan’ireto mpikaroka ireto.Na izany aza, anisan’ny mampanan-karena ny voka-pikarohana ny hamaroany. Maro ny azo sintonina sy halalinina. Ho an’ny avara-pianarana izay fa ho an’ny olona tsotra mamaky ny avoaka any anatin’ireny tambajotran-tserasera ireny, inona no mety ho vokany? “Tsy ho afaka ny hanakana ny fisiana sy ny fampiasana azy ireny isika fa ny azo atao, tezaina amin’ny fomba fampiasana ireny tenolojia ireny ny Malagasy. Atoro ny tsirairay ny hahafahany manovo soa avy amin’ireny”, hoy ny mpahay momba ny fiarahamonina. Iza anefa no ampianatra sy hampita izay fahalalana izay?HaRy RazafindrakotoL’article Mila fitandremana: be loatra ny tantara mampiahiahy a été récupéré chez Newsmada.
Samy amin’ny hasiny
Ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika izao dia takatsika tsara ny hasarobidin’ny fahasalamana, toy ny tombony mihoapampana kanefa tsy nasiana vidiny loatra tamin’ireo zava-maniry azo avadika fanafody ary indrindra ny halafon’ny fitsaboana eto Madagasikara, matoa nifantohana mafy ny fikarohana an’ilay tambavy avy amin’ny artemisia. Mbola lavitr’ezaka ny fampiroboroboana sy fampahombiazana an’io paikady ara-pahasalamana sy fitsaboana io, kanefa inoana fa ny fanombohana ny zava-dehibe ary antenaina hitondra tombontsoa goavana amin’ny fahasalamam-bahoaka izany. Hamehana iray efa noventiventesina sy nikarohambahaolana kosa ny lafiny fanabeazana. Efa novaina an’izao sy izao, na nandrafetana an’ity paikady samihafa ity, nefa tsy mety mahita marimaritra iraisana i Madagasikara iray manontolo. Nahoana tokoa moa no voatery nanaovana antso fahalinana ireo « atidoha » (cerveau) teto amin’ny firenena raha toa ka nanana politikam-panabeazana mafy orina sy tsara rafitra isika? Mbola lesoky ny faharefoan’ny paikadim-panabeazana ny tsy fisian’ireo « atidoha » isaky ny antanantoha-pahefana eto amin’ny firenena : olonolom-poana no iniana apetraka ho lehiben’ny fokontany, fidiana ben’ny tanàna sy solombavambahoaka… Fanarenana maika ny fanabeazana. Tsy iadian-kevitra izany, saingy amin’ny fomba ahoana? Fa amin’izao fotoana izao aza, ny fihazakazahana any amin’ny fanadinam-panjakana no mahadodona, miaraka amin’ny entan-tsaina sy fahalalana norantovina nandritra ny volana vitsy monja. Tsy azo vinavinaina akory hoe hiroso hasina toy ny inona ilay fanabeazana, satria tsy mba loha sy saina tsara tefy no kendrena. Manginy fotsiny ny hamehana amin’ny fampidirana mpampianatra ho mpiasampanjakana kanefa mpiasa mbola hofanina sy zara raha mahatonona ny abidy. Ady amin’ny valanaretina no mahamaika izao, hoy ianao, hany ka mitady hadino fa olombelona tahaka ny Malagasy no manamboatra fitaovam-pitiliana ny tsimok’aretin’ny Covid sy ny fanafody mbamin’ny vakisiny fanefitr’ireny karazana valanaretina ireny. Enga anie ka tsy ho maika ny hamaritra ny daty fidirana amin’ny taom-pianarana vaovao toy ny hatramin’izay hatrany indray ianareo tompon’andraikitry ny fanabeazana eto amin’ny firenena, eny fa na maika koa aza ny fitadiavana minisitra vaovao… Hamehana isan-taona aloha io sehatra iray io, hatramin’izao ! L’article Samy amin’ny hasiny est apparu en premier sur AoRaha.
Mpamatsy vola amin’ilay “volamena 73,5 kg”: nidoboka any am-ponja i Tahola, “mpanao bizina” etsy Analakely
Taorian’ny nisamborana ireo olona niisa 14, efa any am-ponja amin’izao fotoana izao mahakasika ny “Raharaha volamena 73,5 kg” tratra tany Afrika Atsimo, niampy iray indray izany, ny 9 marsa lasa teo. Nidoboka etsy Antanimora koa Rakotondramanana Nestor na i Tahola, rehefa avy natolotra ny teo anivon’ny Pac, araka ny vaovao avy amin’ny Sampandraharaha miadidy ny fifandraisana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Voalaza fa anisan’ireo « mpi-bizina » na mpanao varo-maizina sy takalo vola tsy ara-dalàna etsy Analakely ity voasaringotra amin’ny firaisana tsikombakomba ity. Namatsy volabe an’i Ben Hassan Salimo koa, isan’ny voarohirohy sy karohina amin’ity raharaha ity, ny tenany.Tetikady manokana nentin’ny eo anivon’ny sampana mpikaroka misahana ny heloka bevava avy ao amin’ny Zandarimariam-pirenena ny tsy namoahana filazana fikarohana an’i Tahola ka izao sarona izao. Tsiahivina fa ity “mpi-bizina” ity no faha-15 voasambotra taorian’ny nahavoasaringotra ny mpiasan’ny ladoany sy ny zandary iray, herinandro maromaro lasa. Mitohy kosa ny fikarohana ataon’ny mpitandro filaminana ireo mpanondrana tsy ara-dalàna harem-pirenena ireo ary misy ny valisoa homena ny olona manome vaovao ahafahana misambotra ireo voarohirohy miisa fito. Ao anatin’ireo nanaovana ny filazana fikarohana i Ben Hassan amin’izao fotoana izao.Tsiferana RandriatianaL’article Mpamatsy vola amin’ilay “volamena 73,5 kg”: nidoboka any am-ponja i Tahola, “mpanao bizina” etsy Analakely a été récupéré chez Newsmada.
Hiroso amin’ny fanendrena an’ireo sefo fokontany vaovao eto Antananarivo renivohitra ny fitondrampanjakana, ato ho ato. Nambaran’ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, Préfet –n’ny polisy eto Antananarivo renivohitra, omaly, fa efa miomana amin’ny fandraisana ny lisitr’ireo sefo fokontany ireo izy, ankehitriny. «Tokony tsy ho ela ny fivoahan’io lisitra avy any amin’ny distrika io. Anjarako avy eo ny manao ny fanendrena azy ireo », hoy izy tamin’ny antso an-tariby. Baiko nomen’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry ny fanasaziana an’ireo lehiben’ny fokontany voamarina fa nanararao-pahefana tamin’ny fizaràna ny Vatsy Tsinjo andiany voalohany, satria niteraka fahatezerana teo amin’ny ankamaroan’ny mponina teto an-drenivohitra. Samy nanao tatitra momba izany na ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta na ireo lehiben’ny distrika eto amin’ny kaominina Antananarivo. « Miomana amin’izany fanoloana izany tokoa izahay. Na izany aza, tsy azo irotorotoana ny fanendrena olona vaovao. Ankoatra ny Vatsy Tsinjo dia misy koa ireo sefo fokontany tsy mahavita ny asany intsony ka tsy maintsy soloina », hoy ny lehiben’ny distrika iray eto an-drenivohitra. Am-polony maro Tsy nanome ny isan’ireo sefo fokontany noesorina teo amin’ny toerany ka hosoloina vaovao ny «Préfet». Hany fantatra fotsiny ny fiantefan’ny fanoloana olona am-polony maro. Miisa folo, ohatra, ireo lehiben’ny fokontany nalàna teo anivon’ny Boriborintany fahefatra. Voalaza fa mifanahantsahana amin’io tarehimarika io koa ny an’ny hafa, afa-tsy ny an’ny Boriborintany fahatelo, izay hametrahana sefo fokontany vaovao manodidina ny dimy. Handray toerana vonjimaika ihany anefa ireo sefo fokontany vao hotendrena. Efa nambaran’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjarampahefana, Razafimahefa Tianarivelo fa « hisy ny fanatontosana ny fifidianana lehiben’ny fokontany, rehefa tapitra tanteraka ny hamehana ara-pahasalamana ». L’article Fanoloana eny ifotony :: Antomotra ny fanendrena an’ ireo sefo fokontany vaovao est apparu en premier sur AoRaha.
Tao anatin’ny herinandro, izany hoe, ny 7 septambra hatramin’ny omaly alatsinainy 14 septambra, nahatratra 2 252 ireo olona tratran’ny polisy tsy nanao arovava, ary 117 kosa ny nosazina hanao asa ho amin’ny tombontsoam-bahoaka sy nampidirina ”violon”.Manerana ny Nosy ity hetsika manokana nataon’ny Polisim-pirenena ity ho fanajana ny fampanarahan-dalàna ny fepetra ara-pahasalamana manoloana ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus. Nandritra izany ny nahazoana izao antontanisa nomen’ny polisy izao. Nanamafy ny eo anivon’ny Polisim-pirenena fa mialoha ny fanasaziana, nisy hatrany ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay avy ny hanajan’izy ireo ny fepetra ara-pahasalamana amin’ny alalan’ny fanaovana arovava. Maro rahateo ny alaim-panahy fa efa resy ny valanaretina ka somary goragora amin’ny fanarahan-dalàna. Tsy miraharaha intsony ny fanaovana arovava na manao ihany fa apetraka eo ambany saoka sy/na rehefa mahita mpitandro filaminana vao mody mametaka izany. Raha ity antontanisa nomen’ny eo anivon’ny Polisim-pirenena ity, miisa 2 252 ireo olona nampanaovina TIG ka tany amin’ny faritra Boeny ny tena betsaka indrindra satria nahatratra 464 ny isan’ireo olona nampanaovina izany. Faharoa manaraka izany ny ao amin’ny faritra Diana satria miisa 350 ireo olona nampanaovina TIG. Fahatelo ny faritra Sava, miisa 349, arahin’ny faritra Matsiatra Ambony, miisa 349. Ireo, araka izany, ireo faritra nahitana olona tsy nanara-dalàna ka voatery nampanaovina TIG. Miisa 117 kosa ireo olona naiditra “violon”;“Mbola hitohy ny fanasaziana…”, hoy ny PolisyNanamafy hatrany ny Polisim-pirenena fa hitohy hatrany ny fanasaziana ho an’ireo minia tsy miraharaha ny fepetra napetraky ny fanjakana manoloana izao ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus izao. Miovaova rahateo ny antontanisa omen’ny CCO isan’andro amin’ny fivoaran’ny aretina. Mampahazo vahana ny goragora sy ny gaboraraka koa ny namahana tsikelikely ny fihibohana kanefa tsy hentitra sy/na henjana ny fepetra raisina, hany ka manao izay tiany hatao ny olona sasany indraindray. Zary lasa atao haingon-doha fotsiny ny “visière” ho an’ny mpamily taxi-be sy ny resevera. Tsy hita intsony koa ny tsiranoka fanasan-tanana mialoha ny hidirana ao anaty taxi-be. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany no lalana haingana andresena ity valanaretina ity. “Samy tompon’andraikitra ny tsirairay fa aza atao tahotra amin’ny fanaovana arovava ny mpitandro filaminana”, hoy ny Polisy.Jean ClaudeL’article Tao anatin’ny herinandro: olona 2 252 tratra tsy nanao arovava, 117 naiditra ”violon” a été récupéré chez Newsmada.
Fifanarahana ara-barotra – AFE: tsy ho vesarana antontan-taratasy ny mpandraharaha
Mila fanavaozana betsaka ny fifanakalozana ara-barotra ao anatin’izao fanatontoloana izao, araka ny fanapahan’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny varotra (OMC). Fepetra noraisina momba izany ny fanamoràna ny fifanakalozana.Ny 29 mey teo, novelabelarin’ny Komitim-pirenena momba ny fanamoràna ny fifanakalozana ara-barotra na CNFE (Comité national de la facilitation des échanges) tamin’ireo tompon’andraikitra samihafa avy ao amin’ny minisiteran’ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, miaraka amin’ny fadintseranana ny dingana fanatanterahana izany. Voakasika manokana ny fanafainganana fanondranana sy fampidirana entana mba tsy hampihemotra ireo mpandraharaha. Miara-mitantana io komity io ny talen’ny fadintseranana sy ny talen’ny varotra ivelany ao amin’ny minisitera misahana ny varotra. Tsy ho vesarana antontan-taratasy intsony ny mpandraharaha.Hita fa manahirana ny mpandraharaha betsaka ny fanondranana sy ny fampidirana entana noho ny fandalovana sampandraharaham-panjakana maro. Raha hanondrana vokatry ny asa tanana, ohatra, tsy maintsy lalovana minisitera telo : asa tanana, varotra, fitantanam-bola. Ho fialana amin’izay “lalan-tsarotra” izay indrindra no nahatonga an’i Madagasikara nanao sonia ny Afe (Accord sur la facilitation d’échanges), ny taona 2013, nanangana ny CNFE ny taona 2016, nanao tombana ny mety ilàna rehetra ny 2017, ary nandrafitra tondrozotra ho fampiharana izany ny filankevitry ny governemanta, ny volana oktobra 2018.Hampitombo ny vola miditra amin’ny fanjakanaFanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana io Afe io, hanampiana ireo mpandraharaha mpanondrana sy mpanafatra, tsy hampihemotra ny sasany, hisorohana izay mety ho kolikoly sy fandaniana be loatra, ka manjary misy fiantraikany any amin’ny mpanjifa. Kendrena hampitombo ny vola miditra amin’ny fanjakana ny fampiharana ny Afe. Anisan’ny fepetra noraisina ny fananganana “guichet unique” sy fandoavam-bola elektronika mba tsy handany fotoana ireo mpandraharaha ireo eny amin’ny fadintseranana.Tanjona kendrena amin’izao fanamoràna ny fifanakalozana izao ny hampitombo ny raharaham-barotra ho 25 %, mialoha ny taona 2023. Mialoha izany manomboka izao, maro ireo fepetra raisina alohan’ny 2020, toy ny mahakasika haban-tseranana, fanavaozana ny fepetra eo amin’ny fanondranana sy fanafarana entana, ny loza mety hitranga eny amin’ny sisin-tany… Andrasan’ny mpandraharaha izany izao ny tena ho fampiharana ny Afe fa tsy resaka ambony latabatra fotsiny. Mahazo fanampiana teknika rahateo i Madagasikara momba izany. R.MathieuL’article Fifanarahana ara-barotra – AFE: tsy ho vesarana antontan-taratasy ny mpandraharaha a été récupéré chez Newsmada.
C’est un pays en état de convalescence que les dirigeants actuels doivent faire de nouveau décoller dans tous les domaines. La pandémie de la Covid-19 a détruit le tissu économique de la Grande île et aujourd’hui, après avoir bien résisté sur le plan sanitaire, Madagascar doit maintenant remonter la pente. Le défi de la reconstruction est gigantesque, mais il faut aller de l’avant. L’atmosphère socio-politique actuelle ne facilite pas une remise en marche rapide d’une économie en crise. L’amélioration du sort : Des Malgaches en priorité Le pays a vécu au ralenti durant l’année et demie de pandémie et c’est tout un pan de l’économie qui a été détruit. De nombreuses sociétés ont été mises en faillite, des centaines de milliers de travailleurs se sont retrouvés sans emploi. Des marchés ont été perdus. La fermeture des frontières a été une mesure nécessaire, mais les secteurs pourvoyeurs de devises comme celui du tourisme ont périclité. A présent, l’amélioration de la situation permet d’envisager une reprise des activités des entreprises dépendant de l’extérieur. Ces dernières ont cependant beaucoup souffert car elles attendaient un soutien financier de l’Etat pour leur permettre de tenir. Durant la crise, la demande des membres du patronat et des syndicats de la mise en place d’un véritable plan de relance de l’économie n’a pas reçu de réponse des pouvoirs publics. Le report du paiement des taxes et des impôts n’a duré qu’un temps. La reprise économique se fait attendre. Sur le plan social, la situation n’est guère plus reluisante car la paupérisation de la population a gagné du terrain. 80% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le pouvoir vante à raison la construction d’infrastructures de qualité, mais il ne peut pas passer sous silence la dégradation des conditions de vie de la population. C’est à cette amélioration qu’il doit maintenant s’atteler. Patrice RABE L’article L’amélioration du sort : Des Malgaches en priorité a été récupéré chez Midi Madagasikara.